5 AMAZING BENEFITS OF GREEN APPLES FOR SKIN AND OVERALL HEALTH – OOTDMYANMAR
No Comments on5AMAZING BENEFITS OF GREEN APPLES FOR SKIN AND OVERALL HEALTH
အသားအရည်နဲ့ကျန်းမာရေးအတွက် အစိမ်းရောင်ပန်းသီးကရရှိနိုင်မယ့် အံဖွယ်ကောင်းကျိုး ၅ ချက်
You don’t hear about green apples quite often as you hear about those common red apples. Green apples are as healthy as the red ones. They may tastealittle sour and sweet but they have powerful benefits.
လူတိုင်းက အနီရောင်ပန်းသီးအကြောင်းပြောလေ့ရှိပေမယ့် အစိမ်းရောင်ပန်းသီးအကြောင်းကိုတော့ ကြားရခဲပါတယ်။ အစိမ်းရောင်ရှိတဲ့ ပန်းသီးတွေကလည်း အနီရောင်ပန်းသီးလိုပဲ ကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူပြုပါတယ်။ သူတို့ရဲ့အရသာက ချိုချိုချဉ်ချဉ်လေးဆိုပေမယ့် ရရှိမယ့်အကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့ မနည်းပါဘူး။
1. Increases Metabolism /အစာချေစနစ်ကိုကောင်းမွန်စေခြင်း
Green apples haveahigh fiber content which helps in increasing the body’s metabolism.
ပန်းသီးအစိမ်းတွေမှာ အမျှင်ဓာတ်ပါဝင်မှုနှုန်းမြင့်မားတာကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစာခြေဖျက်တဲ့စနစ်ကို ကောင်းမွန်အောင် ကူညီပေးပါတယ်။
2. Low in fat /အဆီဓာတ်နဲခြင်း
Green apples have low fat content and help in maintaining good blood flow in the body.
ပန်းသီးစိမ်းတွေက အဆီဓာတ်ပါဝင်မှုနည်းတာကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သွေးလည်ပတ်မှုကိုထိန်းညှိရာမှာ ကူညီပေးပါတယ်။
3. Rich Source of Vitamin A and C/ ဗိုက်တာမင် အေ နှင့် စီ ကြွယ်ဝခြင်း
Green apples are an excellent source of vitamin C which keeps the skin cells away from getting damaged and decreases the risk of skin cancer. They are also loaded with vitamin A which helps in maintaining good vision
အရေပြား ဆဲလ်တွေကို ထိခိုက်မှုကနေကာကွယ်ပေးပြီး အရေပြားကင်ဆာမဖြစ်အောင် တားဆီးပေးတဲ့ ဗိုက်တာမင် စီ ကို ပန်းသီးစိမ်းမှာ အများအပြားတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အမြင်ကြည်လင်အောင် စွမ်းဆောင်ပေးတဲ့ ဗိုက်တာမင် အေ လည်း ပါဝင်ပါသေးတယ်။
4. Good For Bones /အရိုးသန်မာစေခြင်း
Green apples are quite rich in calcium content as well. Eatingagreen apple every day can strengthen bones and teeth.
5. Fights Against Ageing/ အိုမင်းရင့်ရော်မှုကိုကာကွယ်ပေးခြင်း
They help in slowing down the aging process and enhance overall beauty.
ပန်းသီးစိမ်းတွေမှာ ကယ်လ်ဆီယမ် ဓာတ် ကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပါတယ်။ ပန်းသီးစိမ်းတစ်လုံးကို နေ့တိုင်းစားပေးခြင်း က အရိုးနဲ့ သွားတွေကို ပိုမိုသန်မာလာစေပါတယ်။
Article from food.ndtv,com
food.ndtv,com မှ ကောက်နုတ်ထားသည်။
Tags greenapple, health, ootdmyanmar
← SIMPLE WAYS TO ENJOY VALENTINE’S DAY → COOL COUPLE OOTDS